काम,कमाइ र व्यापार को लागि २०७८ सबै भन्दा बढी कुन राशिलाई शुभ ? - Mitho Khabar
काम,कमाइ र व्यापार को लागि २०७८ सबै भन्दा बढी कुन राशिलाई शुभ ?
June 27, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on काम,कमाइ र व्यापार को लागि २०७८ सबै भन्दा बढी कुन राशिलाई शुभ ?
व्यापार-व्यवसायको सन्दर्भमा भने यो वर्ष तपाईंको लागि त्यति शुभ नरहला। तपाईंको ऋणमा वृद्धि हुनसक्छ।अधिक खर्च हुनाले आर्थिक संकट आउन सक्छ, ध्यान दिनुहोला। शेयरबजारमा लगानी गर्ने मानिसले यो वर्ष खुब लाभ प्राप्त गर्नेछन्। वर्षको धेरै जसो समय तपाईंलाई आर्थिक संकटले सताउन सक्छ।
यो वर्ष आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा उत्कृष्ट नहुन सक्छ। घरजग्गा तथा निर्माण कार्यहरुबाट प्रशस्त लाभ उठाउन सकिन्छ।ठूला व्यापारीहरुको लागि यो वर्ष अत्यन्त शुभ रहनेछ। सेयरबजारमा संलग्न हुने मानिसले भने यो समयमा सावधान रहन जरूरी छ।
वर्षको सुरुमा धनहानि हुने योग रहेको छ।
आर्थिक रूपले हेर्दा यो वर्ष मिथुन राशि भएका मानिसको लागि शुभ रहनेछ।
वित्तीय क्षेत्रमा गरेको लगानीले तपाईंलाई लाभ दिनेछ। साथै शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पनि निकै उत्तम हुनेछ। दैनिक व्यापारीहरुले प्रशस्त रूपमा लाभ उठाउनेछन्। तर सेयरबजार क्षेत्रमा भने थोरै सावधान रहन आवश्यक रहेको छ।
व्यापार व्यवसाय क्षेत्रका लागि यो वर्ष अत्यन्त शुभ साबित हुनेछ। नयाँ कार्य तथा व्यवसाय सुरु गर्न चाहने मानिसले यो वर्ष तपाईंले उत्कृष्ट सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कसैसँग ठूलो रकम ऋण लिन वा कसैलाई ऋण दिनबाट भने बच्नु होला, अन्यथा नो क्सान हुने सम्भावना उच्च रहन्छ।
आर्थिक क्षेत्रको हिसाबले हेर्ने हो भने सिहं राशि भएका मानिसको लागि यो वर्ष निकै सफल साबित हुनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा संलग्न भएका मानिसले यो समयमा भरपूर लाभ उठाउन सफल हुनेछन्।
सेयर बजारमा लागेका मानिसले भने यो वर्ष अलि सावधानी अपनाउनु पर्नेछ।
तपाईंको आर्थिक पक्ष वर्षभर नै मजबूत रहनेछ।
आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि तपाईंको यो साल मिश्रित रहनेछ। ठूला व्यापारीहरुले यो वर्ष अधिक भन्दा अधिक लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिन्छ।
घरजग्गा तथा गाडीको व्यवसायमा संलग्न मानिसलाई उल्झन र नोक्सानी पनि हुनसक्छ। तपाईंको आर्थिक स्थितिमा पनि उतार-चढाव आउनेछ।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट यो वर्ष तपाईंको लागि अत्यन्त शुभ साबित हुनेछ। दिइएको पैसा फिर्ता आउने सम्भावना रहेको छ।सेयरबजार क्षेत्रमा संलग्न मानिसले यो वर्ष सक्दो लाभ उठाउन सफल हुनेछन्। तरल पदार्थ र खाद्यान्नको कारोबारमा भने समय त्यति अनुकूल नरहला। वर्षभर नै तपाईंको आर्थिक स्थिति मजबूत रहनेछ।
आर्थिक पक्ष मजबूत रहनेछ। व्यापार-व्यवासय क्षेत्रमा केहि समस्या देखा परे पनि अधिक सफलता प्राप्त हुनेछ। आफन्तसँग आर्थिक लेनदेन नगरेकै राम्रो हुनेछ, अन्यथा नोक्सान हुनुका साथै सम्बन्धमा सामेत समस्या आउनसक्छ। सेयर बजारमा संलग्न हुनेको लागि समय अनुकूल रहनेछ। खाद्य पदार्थको कारोबारबाट अधिक लाभ उठाउने मौका मिल्नेछ।
सवारी साधन सम्बन्धि व्यापार गर्ने मानिसले यो वर्ष अधिक लाभ उठाउन सफल हुनेछन्।सेयर बजार अन्तर्गत विमा तथा बैंकिंग क्षेत्रबाट राम्रो आम्दानी हुनेछ। आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा वर्षको सुरुवातमा तपाईंको आर्थिक पक्ष मजबूत रहनेछ।
यो वर्ष कुम्भ राशिका मानिसको लागि व्यापार-व्यवसाय क्षेत्रमा अधिक अनुकूल समय रहनेछ। प्राविधिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीले तपाईंलाई मालामाल गराउँनेछ। सेयर बजारमा संलग्न मानिसको लागि समय अनुकूल रहनेछ। इलेक्ट्रोनिक क्षेत्रका मानिसले पनि यो वर्ष लाभ उठाउनेछन्। वर्षभर नै तपाईंको आर्थिक स्थिति मजबूत रहनेछ।
यो वर्ष तपाईंको आर्थिक पक्ष सबल रहनेछ। पहिले लिइएको ऋण तिर्न सफल भइनेछ। आयको तुलनामा व्यय बढी हुनेछ सेयर बजारमा संलग्न मानिसले ध्यान दिनु पर्नेछ। स्वास्थ्य तथा हार्डवेयरको व्यवसाय गर्ने मानिसको लागि यो वर्ष अत्यन्त शुभ साबित हुनेछ। प्राविधिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट पनि राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। वर्षको अन्त्यतिर धन लाभ मिल्ने सम्भावना छ
“मभन्दा राम्रा नेता आए आजै पद छोड्छु” – प्रचण्ड ।
यो सालमा यी राशिहुनेहरूको चम्किने छ भाग्य, वार्षिक राशिफल हेर्नुहोस्
April 13, 2020 mithokhabar
नेपाली हिरोईनलाई पनि यस्तो टक्कर दिने Tik Tok बाट भाईरल पुर्वकी यी चेली (भिडियो हेर्नुस)
पुरुष बिना महिलालाई फरक पर्दैन तर, महिलाविना पुरुषको जिन्दगी के हुन्छ…..
September 17, 2020 September 17, 2020 mithokhabar